zimabawe on News24
LAST UPDATED: 2013-05-21, 05:22
The Zimbabwe prime minister's party has dismissed an opinion poll projecting a surge in Mugabe popularity.
Beware of foreign forces, says Mugabe
Press freedom organisations have denounced plans by the Zimbabwe media controller to have some foreign newspapers banned, ahead of possible elections this year.
Deadline for Zimbabwe polls: Tsvangirai
Zim energy minister charges dropped
Zimbabwe state prosecutors have withdrawn corruption charges against the country's energy minister.
Zimbabwe MDC minister not corrupt
Zimbabwe energy minister released
Zuma set for Zimbabwe peace talks 2012-08-13 22:20
President Jacob Zuma is to meet Zimbabwean leaders to press for political reforms and new elections under a recently finished draft constitution.
Zimbabwean President Robert Mugabe has been endorsed again by his party to stand for elections expected next year.
Mugabe pushes for 2012 electionsview